मुलुकको सबैभन्दा ठूलो औद्योगिक पार्कको डिपिआर स्वीकृत, कति छ जम्मा लगानी ? « Salleri Khabar
मुलुकको सबैभन्दा ठूलो औद्योगिक पार्कको डिपिआर स्वीकृत, कति छ जम्मा लगानी ?
९ असार, काठमाडाैँ । सरकारले मुलुकको सबैभन्दा ठूलो औद्योगिक पार्कको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) स्वीकृत गरेको छ । लगानी बोर्डको आज बसेको बैठकले चाइना नेपाल फ्रेण्डसिप इन्डस्ट्रियल पार्कको डिपिआर स्वीकृत गरेको हो ।
सो अवसरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ऊर्जासम्बन्धी परियोजनाको विकास गर्दा त्यससँगै प्रसारण प्रणालीको समेत निर्माण कार्य अगाडि बढाउन निर्देशन दिए । त्यसका लागि आवश्यक समन्वय तथा सहजीकरण गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देश गरेको प्रवक्ता बरालले जानकारी दिए ।